Emeelarịrị OpenRGB 1.0, ngwa maka njikwa ngwaọrụ RGB | Site na Linux
Emeelarị OpenRGB 1.0, ngwa maka ijikwa ngwaọrụ RGB
N'oge na-adịbeghị anya Ihe ngosi OpenRGB nke 1.0 kwupụtara, nke na mbu amara ya dika OpenAuraSDK. Nke a version 1.0-abịa mgbe a afọ nke na-aga n'ihu mmepe nke ngwá ọrụ nke Ebumnuche iji nye usoro ihe omume ngwanrọ na ọbá akwụkwọ mfe iji iji nweta ma jikwaa ọkụ RGB na akụrụngwa PC dị iche iche, gụnyere motherboards, modulu RAM, kaadị eserese, ngwaọrụ jụrụ, yana akụkụ.
Ihe oru ngo a lebara anya na ASUS Aura naanị. Emepụtara ya site na ngalaba AsusAuraWindows nke Keyboard Visualizer iji mụtakwuo banyere nkọwa dị n'azụ usoro Aura na ịzụlite onye na-agbanwe agbanwe, dakọtara, ma nwee ntụkwasị obi maka Aura.
1 Banyere OpenRGB
2 Etu esi etinye OpenRGB na Linux?
Mmejuputa iwu a siri ike ma na-akwado ọtụtụ ọgbọ nke Aura njikwa na Intel na AMD nyiwe, nke na-ewepụ mkpa ọ dị itinye ngwa ndị ọrụ gọọmentị na-kegide a kpọmkwem emeputa.
OpenRGB dakọtara na ndị ọkwọ ụgbọala Aura dakọtara eji dị iche iche RGB ebe nchekwa modul Nsukka gụnyere G.Skill Trident Z RGB na ndị ọzọ.
Ọrụ ahụ na-enye ọba akwụkwọ ọrụ nke nwere API zuru ụwa ọnụ iji jikwaa ọkụ azụ nke ngwa, ihe njikwa ihe na eserese eserese na Qt. Na-akwado nhọrọ nke ụdị mgbanwe agba (agba agba, wdg), njikwa mpaghara ọkụ ọkụ, ntinye nke nsonaazụ dị elu, nkọwapụta imepụta LED na mmekọrịta nke ọkụ azụ na omume emere (egwu agba, wdg).
Ihe ngwugwu na akwado ASUS, Gigabyte, ASRock na MSI motherboards nwere RGB subsystem iji nyeghachi ụlọ, backlit ebe nchekwa modul site na ASUS, Corsair na HyperX, kaadị ASUS Aura na Gigabyte Aorus, dị iche iche Ikanam warara ọkwọ ụgbọala (ThermalTake, Corsair, NZXT Hue +), ndị na-eme ka mmiri na-enwu gbaa, ụmụ oke, ahụigodo, ekweisi, na ngwa ngwa Razer.
A na-enweta ihe ọmụma banyere usoro mmekọrịta mmekọrịta ngwaọrụ site na nke ndị na-anya injinia na ngwa ndị ọzọ.
N'ọtụtụ oge, iji i2c-dev ma ọ bụ ịchịkwa site na USB zuru ezu iji soro kọmputa ahụ na-emekọrịta ihe, ọ bụ ezie na iwu udev na-atụkwa aro. Iji ndị ọkwọ ụgbọ ala RGB nke Aura / ASRock motherboard chọrọ Linux kernel patch. Maka akụkụ nke Razer, a na-eji ọkwọ ụgbọala OpenRazer (ngwugwu openrazer-dkms-drivers na Debian / Ubuntu).
Edere koodu ahụ na C / C ++ ma kesaa ya n'okpuru ikike GPLv2. Ihe omume a bu otutu ndu ọ dịkwa maka Linux na Windows.
N'ikpeazụ pNwere ike ịlele ngwaike ngwaike nke na-akwado ịba uru ugbu a njikọ na-esonụ.
Etu esi etinye OpenRGB na Linux?
Maka ndị nwere mmasị ịwụnye OpenRGB na sistemụ ha, ha kwesịrị ịgbaso ntuziaka ndị anyị kesara n'okpuru.
Ihe mbụ anyị ga-eme bụ wụnye mbipụta Qt kachasị ọhụrụ. (Can nwere ike ịlele nkọwa nke Qt Onye Okike echichi na njikọ na-esonụ).
N'ihe banyere Ubuntu na nkwekọrịta, anyị ga-etinye ụfọdụ ịdabere:
Ugbu a, anyị ga-enweta iwu ahụ na iwu:
Mere nke a ugbu a anyị ga-imelite submodul:
Na ebe a anyị nwere ike ịme ihe abụọ, otu n'ime ha bụ imepe ọrụ ahụ na onye ọrụ QT ma ọ bụ chịkọta ya na sistemụ ahụ.
Iji chịkọta, naanị gbaa ọsọ iwu ndị a:
Ná ngwụsị nke mkpokọta anyị ga-ahapụrịrị ịnweta SMBus.
Na Intel anyị nwere ike ime ya na iwu:
Ma ọ bụ n'ihe banyere AMD, anyị ga-ebu ụzọ depụta ndị ọkwọ ụgbọ ala SMBus nwere:
Ozugbo achọpụtara onye njikwa ahụ, anyị ga-enyerịrị ikikere nye onye njikwa ahụ, dịka ọmụmaatụ:
N'ikpeazụ, ekwesịrị iburu n'uche na a ka nwere ikike ụfọdụ iji nọgidesie ike na mbidogharị niile, mana isi ọrụ ịhazi agba na ụdịdị dị mma.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere ya ị nwere ike ịlele nkọwa Na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Emeelarị OpenRGB 1.0, ngwa maka ijikwa ngwaọrụ RGB